VA Series Factory - China VA Series ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 3HP ဗိုင်းလိပ်တံပါဝါမော်တာဆုံလည်ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက်
လည်ပတ်နှုန်း: 80-5440rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် Axis Travel: အမ်မီတာ ၁၀၀၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၄၄၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၃၉၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: R8 (NT30) ဗိုင်းလိပ်တံစွမ်းအား - 3HP စားပွဲတင်အရွယ်အစား: ၁၃၇၀ * ၂၅၄ * ၉၀ မီလီမီတာဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်မူရင်းထိုင်ဝမ်မူရင်း ကြိတ်ခွဲခြင်းခေါင်းစဉ် (၁) HT-250 ဗဓေလသစ်သန္ဓေသားကိုခန္ဓာကိုယ်သွန်းလောင်းရန်အတွက်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ စားပွဲသည် HT-300 ဗဓေလသစ်သဲဖြစ်သည်။ ပူးတွဲကြိတ်စက်၏မျက်နှာပြင်မာကျောမှုနှင့်လမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်ကို HRC-45 မှ ၄၈ ဒီဂရီအထိတိုးမြှင့်သင့်သည်။
NT40 Horizontal Turret Milling Machine ဒူးပြားကြိတ်စက် 5VB နှင့် 1470 * 305 * 90mm Table Table
လှည့်လည်နှုန်း: 60-3000rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် X ဝင်ရိုး: ခရီးသွား 810mm Y ဝင်ရိုး: 415mm Z ကိုဝင်ရိုးခရီးသွား: 420mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: NT40 ဗိုင်းလိပ်တံပါဝါ: 5HP စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1470 * 305 * 90mm ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခေါင်းကိုဒေါင်လိုက်စက်စက် 1 ။ သိုးလှုပ်ရှားမှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုအာမခံပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အထူးလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန် Turntable ဖြင့်လှည့်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်ကိရိယာလိုအပ်ချက်များ - ဦး ခေါင်း၏အမြန်နှုန်းမှာ ၁၈၆၀ rpm ပါရှိပြီး single-blade flyingtool နှင့်အတူအချင်း ၈၀ မီလီမီတာ။ ၂။ HT-2 ...
ထိုင်ဝမ်မူရင်း 5HP RAM ဆုံလည်စက် NT40 ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်
လည်ပတ်နှုန်း: 70-3600rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် Axis သွားလာမှု - ၈၅၀mm Y ဝင်ရိုးတန်းခရီး - ၃၉၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၄၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံကုတ်: NT40 ဗိုင်းလိပ်တံစွမ်းအား - ၅HP စားပွဲတင်အရွယ်အစား: ၁၃၇၀ * ၃၃၀ * ၉၉ မီလီမီတာထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်စက် - မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်။ 6VA စားပွဲအရွယ်အစား ၁၃၇၀ * ၃၃၀ * ၉၉ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုးသည် ၈၅၀ မီလီမီတာ Y ၀ င်ရိုးခရီးစဉ် ၃၉၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးသည် ၄၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ quill 150mm အမြင့်အကွာအဝေးဗိုင်းလိပ်တံနှာမှ ၅၇၇ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလည်ပတ်မြန်နှုန်း 70-3600 / (10Grades) / 50HZ 80-5 ။ ..
ဒေါင်လိုက်စက်မှုစက်ကြိတ်စက်၊ Universal ဆုံလည်ကြိတ်စက် - ၈၀၄၀rpm
လည်ပတ်နှုန်း: 80-5440rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် Axis သွားလာမှု - ၈၈၀mm Y ဝင်ရိုးတန်းခရီး - ၃၉၅ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၃၄၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ Taper: R8 (NT30) ဗိုင်းလိပ်တံစွမ်းအား - ၃HP ဇယားအရွယ်အစား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ * ၉၀mm ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက် ကြိတ်စက် ၁။ အဆင့်မြင့် meehannite ပုံသွန်းခြင်း၊ နှစ်မြှုပ်ထားသောနံရိုး၊ အကောင်းဆုံးတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ပျားလပို့နံရိုးနံရံ၊ တင်းကျပ်မှု၊ ကြိတ်ခေါင်းတွင် 3HP မော်တာ၊ ၁၆ စက္ကန့် ...
R8 သို့မဟုတ် NT30 ဗိုင်းလိပ်တံဒူးခေါင်းအမျိုးအစားကြိတ်စက်နှစ်ချက်ပါသောနံရိုး
ခရီးသွားခြင်း: ၃၄.၆၅ * ၁၅.၅၅ * ၁၃.၃၈ လက်မ Sipindle Quill: ဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲမှ 127mm Max.distance: 400mm Rotation Speed: 70-3600rpm Taper: R8 / NT30 အမည်: Turret Milling Machine R8 သို့မဟုတ် NT30 Spindle Turret Milling Machine 3VA 34.65 * 15.55 * ၁၃.၃၈ လက်မခရီးသွားကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ - ၁။ အဆင့်မြင့် meehannite သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ နှစ်မြှုပ်ထားသောနံရိုး၊ အကောင်းဆုံးတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ပျားလပို့နံရိုးနံရံ၊ တင်းကျပ်မှု၊ တင်သွင်းထားသော spi ကိုသုံးပါ။
Step Speed ​​Head Bridgeport ဒေါင်လိုက်စက်မှ ၇၀ - ၃၆၀၀rpm လည်ပတ်နှုန်း
ဇယား: ၅၀ လက်မစောင်းထောင့် - ၀ င့်ဒင့်နှင့်စားပွဲမှ± 45 ° / ± 90 ° Max.distance - 400mm အလှည့်အရှိန်: 70-3600rpm ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: အဆင့်အမြန်ကြိတ်ခွဲခေါင်းခေါင်း: ဆုံလည်ကြိတ်စက် 50 လက်မစားပွဲဆုံလည်ဆုံလည်စက် 3VA အဆင့်မြန်သောကြိတ်ခွဲစက် ဦး ခေါင်း ၄၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ - ၁။ အဆင့်မြင့် meehannite ပုံသွန်း၊ နှစ်မြှုပ်ထားသောနံရိုး၊ အကောင်းဆုံးတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ပျားလပို့နံရိုးနံရံ၊ တင်းကျပ်မှု၊ ကြိတ်ခွဲသောခေါင်းသည်မွေးစား ...
1000mm X Axis ခရီးသွားလည်ပတ်လည်စက်၊ 3HP ဒူးအမျိုးအစားကြိတ်ခွဲစက်
X ဝင်ရိုးလမ်း - ၁၀၀mm X ဝင်ရိုးလမ်းလမ်းညွှန်လမ်း - Dovetail လမ်းစားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - ၁၃၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၈၀-၅၄၄၀ / (၁၆ တန်း) ၆၀HZ Rpm ပါဝါ - 3HP Bearing အမှတ်တံဆိပ်: NSK 1000mm X ဝင်ရိုးတန်းတွင်လည်ပတ်လည်လည်စက် - NSH BearingProduct အင်္ဂါရပ်များ1။ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ မှိုများနှင့်အပေါက်များ၊ အပေါက်များနှင့်ဘောင်များပြုပြင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ ၂။ လုပ်ငန်းခွင်မျက်နှာပြင်နှင့် ၃ ၀ င်ရိုးလမ်းလမ်းညွှန်လမ်းကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးတိကျခိုင်မာမှုကိုအခြေခံသည်။ NSK P4 bearings များကိုစက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ...
Universal Milling ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်စက်ကြိတ်စက် 1600 * 2000 * 2450mm Dimension
အခြေအနေ: အရောင်အသစ်: Custemer လိုအပ်ချက်ဗို့အား: Custemer လိုအပ်ချက်ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: NT40 X / Y / Z ခရီးသွား: 850 * 390 * 450mm ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်: 70-3600 (10 ဒီဂရီ) 50HZ စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1370 * 330 * 99mm ဗိုင်းလိပ်တံ: 5HP အရွယ်အစား: 1600 * 2000 * 2450mm စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 2200kg Universal Milling ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်စက်စက် 1600 * 2000 * 2450mm အရွယ်အစား 1. ထိုင်ဝမ်မှမူရင်းခြေလှမ်းမြန်နှုန်းကြိတ်စက်၏ ဦး ခေါင်း။ 2. 1270 * 254 * 90 အလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာ။ dovetail လမ်းနှင့်အတူ X / Z ကိုဝင်ရိုး, Y ကိုဝင်ရိုး wi ...
စားပွဲတင်ခရီးသွားခြင်း - ၁၀၀၀ * ၅၀၀ * ၅၀၀mm X ၀ င်ရိုးလမ်းလမ်းညွှန်လမ်း - Dovetail လမ်း - စားပွဲအရွယ်အစား - ၁၃၇၀ * ၃၃၀ - ၉၉ မီလီမီတာအလှည့်အမြန်နှုန်း - ၇၀-၃၆၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံစွမ်းအား - ၅HP ဗိုင်းလိပ်တံ: - P4 P4 ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည်ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် - ၀ င်ရိုး - Dovetail လမ်း 70-3600rpm 7VAProduct Features1 ။ Y နှင့် Z ဝင်ရိုးပေါ်တွင် Squareguideway သည်ခိုင်မာသောခိုင်မာမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ X ဝင်ရိုး dovetail guideway.2 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ worktable မျက်နှာပြင်နှင့်3ဝင်ရိုးလမ်းညွှန်လမ်းခိုင်မာခြင်းနှင့်တိကျ ground.3 နေကြသည်။ NSK P4 အ ၀ တ်အစားများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ဗိုင်းလိပ်တံတွင်အသုံးပြုသည်။
R8 ဗိုင်းလိပ်တံ Universal အလိုအလျောက်ကြိတ်ခွဲစက်ဒူးပြား 4VA ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံမှု 0.002mm
လည်ပတ်နှုန်း: 80-5440rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် Axis Travel: 900mm Y Axis Travel: 405mm Z Axis Travel: 350mm Spindle Taper: R8 (NT30) Spindle ပါဝါ: 3HP စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1270 * 254 * 90mm ထိုင်ဝမ်နှင့်ဆုံလည်ကြိတ်စက်။ မူရင်းကြိတ်ခွဲစက် 1. ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်၊ Janpan P4 တိကျစွာဗိုင်းလိပ်တံ။ ၂။ တိကျသောအမာရွတ်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ 3. အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အပေါက်များ၊ အပေါက်များ၊ 4. ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု: 0.002mm ...
60 - 3000rpm လည်ပတ်အမြန်နှုန်းဆုံလည်စက် NT40 ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်
လှည့်လည်နှုန်း: 60-3000rpm အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက် Axis ခရီးသွား: 680mm Y ကို Axis ခရီးသွား: 415mm Z ကို Axis ခရီးသွား: 420mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: NT40 ဗိုင်းလိပ်တံပါဝါ: 5HP စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1270 * 254 * 90mm Universal ကြိတ်စက်ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်စက်။ နှစ်ကြိမ် ကြိုတင်၍ ခြစ်ခြင်းသည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေသည်။ 2. HT-250 ဗဓေလသစ်သန္ဓေသားလောင်းနှင့်အခြားကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ စားပွဲသည် HT-300 ဗဓေလသစ်သဲဖြစ်သည်။ ပူးတွဲကြိတ်စက်၏မျက်နှာပြင်ခိုင်မာမှုကိုစားပွဲနှင့်လမ်းညွှန် ...
80 - 5440/16 Grades 60HZ ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းနှင့်အတူ 3HP Power Bench ထိပ်တန်းကြိတ်စက်
အသားတင်အလေးချိန်: 1500mm ခရီးသွားခြင်း: 900 * 420 * 370mm စားပွဲတင်အရွယ်: 1270 * 254mm ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 80-5440 / (16 တန်း) 60HZ Rpm ပါဝါ: 3HP ဗိုင်းလိပ်တံဝက်ဝံ: P4 3HP ဆုံလည်ကြိတ်စက် 4VB P4 ဗိုင်းလိပ်ဝက်ဝံ 80 - 5440 / 16 တန်း 60HZ ဗိုင်းလိပ်တံ SpeedOur ဝန်ဆောင်မှု: 1 ။ ဤတစ်နှစ်အာမခံကာလအတွင်းဆုံလည်ကြိတ်စက်များသည်အတုမဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၂၃ နှစ်အတွက်စက်မှုလက်မှုနည်းပညာအတွေ့အကြုံပိုများသည်။